Parsely: Ọdịnaya na-ekwusara nchịkọta mere nri | Martech Zone
Parsely: Ọdịnaya Publishing nchịkọta mere ziri ezi
Fraịde, Ọgọstụ 19, 2016 Fraịde, Ọgọstụ 19, 2016 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-etinye ego na mmepe nke ọdịnaya, ị ga-ahụ ọkọlọtọ nchịkọta ọ dịghị ihe na-erughị nkụda mmụọ. Ndị a bụ ihe ole na ole… ndị edemede, edemede, ụbọchị mbipụta na nkpado. Enwere ụfọdụ ajụjụ ụlọ ọrụ gị jụrụ gị nke ị na-enweghị ike ịza:
Kedu ọdịnaya nke anyị bipụtara n'ọnwa a mere nke kacha mma?
Kedu onye edemede na-eme ka ọtụtụ okporo ụzọ gaa na saịtị anyị?
Kedu akara ngosi kachasị ewu ewu?
Kedu ụdị ọdịnaya kachasị ewu ewu?
Tugharia.ly ndị mmekọ na ndị na-ebipụta dijitalụ iji nye nghọta doro anya nke ndị na-ege ntị site na nghọta nchịkọta ikpo okwu. Ọtụtụ puku ndị edemede, ndị editọ, ndị njikwa saịtị, na ndị na-eji nkà na ụzụ eme ihe Tugharia.ly ịghọta ihe ọdịnaya na-adọta na ndị ọbịa na weebụsaịtị, yana ihe kpatara ya. Ndị ahịa na-eji Parse.ly si dashboards na API iji wuo atụmatụ dijitalụ na-aga nke ọma nke na-enye ha ohere itolite ma soro ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe.
Parse.ly na-agbaji arụmọrụ nke ọdịnaya gị n'ime dashboards dị mfe mgbaze, gụnyere nyocha, arụmọrụ onye edemede, ngwaọrụ, echiche akụkọ ihe mere eme, arụmọrụ post, arụmọrụ ngalaba, na ndị na-ezo aka. I nwekwara ike igbanye ma zipu akụkọ.
Atụmatụ Parse.ly gụnyere:
Dashboard ọdịnaya - Parse.ly's real-real content dashboards ugbu a tụkwasịrị obi ndị ọrụ karịrị 700 nke web kasị elu-okporo ụzọ na saịtị, gụnyere TechCrunch na The Intercept. Ọ na-akwado ọnụọgụ ọnụọgụ site na igbe, dịka echiche, ndị ọbịa, oge, na mbak.
API - Parse.ly si API achikota ozi banyere okporo ụzọ na ọdịnaya maka ebumnuche nke ịnye ngwa ngwa ụzọ iji nye njikọ ọdịnaya saịtị; ọnụọgụ okporo ụzọ maka mbupụ data ngwa ngwa; ma ọ bụ njikọta dị mfe nke Parse.ly okporo ụzọ data na sistemụ njikwa ọdịnaya dị. Ọ bụ ngwa ọrụ njikọta maka ngwa ngwa itinye saịtị, ngwa, na akụkọ na data Parse.ly - gụnyere data okporo ụzọ anyị.
Ọdụ data - Parse.ly's Data Pipeline bụ API kachasị, na-enyefe oke data gbasara saịtị, ngwa na ndị ọrụ gị, yana obere iwe na mgbanwe kachasị. Ọ bụ ọgaranya ụzọ kpọghee 100% nke data n'azụ Parse.ly's nchịkọta, ma nyochaa ya maka mkpa nke nzukọ gị. Ọ bụ ọnyà, ma nwee ike ịkwado mmemme omenala nke ụdị niile. Nwere mmasi ịtụ omimi akwụkwọ mpịakọta, omume nnweta saịtị, ntinye akwụkwọ nkwado ọdịnaya, echiche ngosi ngosi, ma ọ bụ ndebanye ndebanye aha? Enwere ike ịme nke ọ bụla n'ime ha dịka mmemme, zigara na Parse.ly, ma nyefee ha na Pipeline Data.
Akụkọ nyocha Parse.ly
Ndị na-ede akwụkwọ nyocha Parse.ly
Ozi ihuenyo Parse.ly
Ngwaọrụ Ihuenyo Parse.ly
Ntughari ihu ederede Parse.ly
Akụkọ ihe mere eme Gosi Posts Parse.ly
Isi nnyocha Nsuso Parse.ly
Tags: usoro ndị na-ege ntịnchịkọta ọdịnayanghọta ọdịnayametrik ọdịnayametrik arụmọrụ arụmọrụNwachukwu.lypasilindị na-ede akwụkwọnsuso site na mbipụta ụbọchịnsuso edemedeakara mkpado
Etu esi gbakọọ uru ndụ onye ọrụ ekwentị gị